I-Ultrasonic Deagglomeration yeSilica Nanoparticles - Hielscher Ultrasound Technology
I-silica nanoparticles efana ne-silica enefutha (isib. I-Aerosil) iyisengezo esisetshenziswa kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene. Ukuze uthole i-nanosilica esebenza ngokugcwele enezinto ezibonakalayo ezifunwayo, izinhlayiya ze-silica nano kufanele zisuswe futhi zisatshalaliswe njengezinhlayiya ezihlakazeke zodwa. I-Ultrasonic deagglomeration ikhonjisiwe ukuthi iyindlela esebenza kahle kakhulu futhi enokwethenjelwa yokusabalalisa i-nanosilica ngokufana njengezinhlayiya ezihlakazeke zodwa ekumisweni.
I-Nanosilica – Izici kanye nezicelo
I-silika (i-SiO2) futhi ikakhulukazi i-silica nanoparticles (i-Si-NPs) izithasiselo ezivamile ezimbonini eziningi. Izinhlayiya ze-silica ezilingana no-nano zinikeza indawo enkulu kakhulu futhi ziveza izici zezinhlayiya ezihlukile, ezisetshenziselwa izimboni eziningi ngezinhloso ezahlukahlukene. Isibonelo, izakhiwo ezihlukile zezinto ze-nano-sized SiO2 zisetshenziselwa ukuqinisa (nano-) izinhlanganisela, ukhonkolo nezinye izinto. Izibonelo ukumbozwa okususelwa ku-nanosilica okunikeza izakhiwo ezingacimi umlilo noma ingilazi eboshwe nge-nanosilica ethola ngaleyo ndlela izakhiwo zokuphikisa. Embonini yokwakha neyokwakha, i-silica fume (microsilica) ne-nanosilica zisetshenziswa njengezinto ze-pozzolanic ezisetshenziselwa ukuthuthukisa ukusebenza kwezakhiwo kanye nokuqina nokuqina kokhonkolo. Lapho kuqhathaniswa i-silica fume ne-nanosilica, i-nano-structured SiO2 I-pozzolan isebenza ngokwengeziwe kusigaba sokuqala kunomlilo we-silica ngoba i-nanosilica inikela ngendawo ethile ebaluleke kakhulu nobuhle. Indawo enkulu inikezela ngamasayithi amaningi okuphendula ngokhonkolo futhi inikela ngqo ekwakhiweni kokhonkolo okuthuthukisiwe ngokwenza njenge-nucleus. Ukuvuthwa kwegesi, inkomba yokuqina kukakhonkolo, kuyathuthukiswa kukhonkolo oqiniswa nge-nano-silica ngokuqhathaniswa nekhonkrithi equkethe umusi wendabuko wesilica.
Ku-biomedicine nakwisayensi yokuphila, i-SiO2 Ama-nanoparticles aphenywa kabanzi ngezicelo ezahlukahlukene kusukela endaweni ephezulu, ukuhlangana kahle kakhulu, nosayizi we-pore olungiswayo we-nanosilica unikezela ngezinsiza ezahlukahlukene zezinoveli kufaka phakathi ukulethwa kwezidakamizwa kanye ne-theranostics.
Ishadi libonisa ukusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana ze-nano-silica ngaphambili (ijika eliluhlaza) nangemuva (ijika elibomvu) ukusabalalisa kwe-ultrasonic.
I-Nano-silica slurries – ngemithwalo eqinile ephansi iye phezulu kakhulu – ingahlakazeka ngokuthembekile kusetshenziswa i-ultrasonication. Isithombe sikhombisa ifayili le- I-UIP2000hdT ekusethweni kwenqwaba.
I-Ultrasonic Deagglomeration nokusabalalisa kweNano-Silica
Isimiso esisebenzayo se-ultrasonic deagglomeration kanye nokusabalalisa sisuselwa kumiphumela ye-ultrasonically eyenziwe cavitation, eyaziwa ngokwesayensi njenge-acoustic cavitation. Ukusetshenziswa kwe-high-power, low-frequency ultrasound ku-liquids noma ama-slurries kungadala i-acoustic cavitation futhi ngaleyo ndlela kube nezimo ezimbi kakhulu, ezenzeka endaweni njengezingcindezi eziphakeme kakhulu namazinga okushisa, kanye ne-microstreaming ngama-jets ajwayelekile afinyelela ku-280m / s. Le miphumela enamandla yomzimba neyomshini ye-ultrasonic cavitation ibangela ukuguguleka ebusweni bezinhlayiyana kanye nokuchithwa kwezinhlayiya ngokushayisana kwe-inter-particle. La mandla amakhulu we-ultrasonic / acoustic cavitation enza i-sonication indlela esebenza kahle kakhulu futhi ethembekile yokwenziwa kwe-deagglomeration nokusakazwa kwezinhlayiya ezilingana nano njenge-nano-silica, ama-nanotubes nezinye izinto ze-nano.
Ukusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana ze-nano-silica ene-ultrasonically deagglomerated (usebenzisa i-Hielscher UP400St ultrasonicator) emanzini (a) 1 wt%, (b) 2 wt%, (c) 5 wt%, kanye (d) 10 wt% Aerosil 200 ngezikhathi ezahlukahlukene.
Ukufunda namagrafu: i-Vikash 2020.
Ukucubungula kwe-Ultrasonic kwe-Silica ngama-High Solid Concentrations naku-Viscous Liquids
Ukuhlakaza ama-nanoparticles ezindaweni ezinomqondo ophansi sekuvele kuyinselelo ngoba amandla okuhlanganisa amakhemikhali njengezibopho ze-ionic, ama-covalent bonds, ama-hydrogen bond, kanye nokuhlangana kwe-van der Waals kufanele kunqotshwe. Ngokukhula kokuhlushwa kwama-nanoparticles, isb. Izinhlayiya ze-nano-silica, ukuxhumana kwamakhemikhali phakathi kwama-nanoparticles kukhuphuke kakhulu, futhi. Lokhu kusho ukuthi inqubo yokuhlakazeka enamandla ibalulekile ukuze kutholakale imiphumela emihle, yesikhathi eside yokusabalalisa ehlakazekile. Ama-ultrasonic dispersers asetshenziswa njengendlela yokuhlakazeka ethembekile futhi esebenza kahle kakhulu, ekwaziyo ukucubungula ama-slurries ngama-viscosities aphezulu futhi nama-pastes anokugxila okuphezulu kakhulu. Amandla wokucubungula ama-slurries anezinto eziningi eziqinile ze-nano-particles aphendulela i-ultrasonication kubuchwepheshe obusakazwayo bokusabalalisa izinto ze-nano-materials.
Ama-ultrasonicators ezimboni ze-Hielscher angacubungula i-slurry yakho noma unamathisele ku-reactor e-inthanethi eqhubekayo inqobo nje uma ingondliwa ngepompo.
Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic kwe-Silica Nanofluids
UModragon et al. (2012) walungisa ama-silica nanofluids alungiswe ngokusabalalisa ama-silica nanoparticles emanzini acwecwe kusetshenziswa i- uhlobo lophenyo lwe-ultrasonicator UP400S. Ukuze ukhiqize ama-nanofluid e-silica azinzile ngokuqukethwe okuthile okuqinile (okungukuthi, ama-20%), ane-viscosity ephansi futhi njengokuziphatha ketshezi, kuqukethe ukwelashwa kwamandla okuphezulu nge-probe ye-ultrasound imizuzu emihlanu, imidiya eyisisekelo (amanani we-pH angaphezulu kuka-7) futhi akukho ukungezwa kasawoti. Ukusabalalisa kwe-ultrasonic kuholele kuma-nanofluids ane-viscosity ephansi. Ama-nanofluids alungiselelwe nge-ultrasonically aziphatha njengoketshezi futhi alungiswa ngo-20% wokulayisha okuqinile kungakapheli isikhathi esifushane kakhulu ngenxa yokusabalalisa okuhle okutholwe nge-sonication.
"Kuzo zonke izindlela zokuhlakazeka ezitholakalayo, ukuhlakazeka nge-ultrasonic probes kuqinisekisiwe njengeyona ephumelela kakhulu." (UModragon et al., 2012)
UPetzold et al. (2009) wafinyelela esiphethweni esifanayo sokwenziwa kwe-deergilumeration ye-Aerosil powder ukuthola ukuthi iphenyo le-ultrasonic yilona olusebenza kakhulu uhlelo lokusabalalisa ngenxa yamandla agxile kakhulu asetshenzisiwe.
Ama-Ultrasonicators weDegglomeration kanye nokuhlakazeka kweSilica Nanoparticles
Lapho i-nano-silica isetshenziswa kwizicelo zezimboni, ucwaningo noma isayensi yezinto ezibonakalayo, imust eyomile ye-silica powder ifakwe esigabeni samanzi. Ukusabalalisa kwe-Nano-silica kudinga inqubo ethembekile nephumelelayo yokusabalalisa, esebenza ngamandla anele ukususa izinhlayiya ze-silica eyodwa. Ama-Ultrasonicators aziwa njengama-dispersers anamandla futhi anokwethenjelwa, ngakho-ke asetshenziselwa ukwenza i-deagglomerate futhi isabalalise izinto ezahlukahlukene ezifana ne-silica, ama-nanotubes, i-graphene, amaminerali nezinye izinto eziningi ngokufana kusigaba samanzi.
Imiklamo ye-Hielscher Ultrasonics, ikhiqiza futhi isakaze ama-dispersers asebenza ngokusezingeni eliphezulu kunoma yiluphi uhlobo lwe-homogenization kanye ne-deagglomeration applications. Uma kukhulunywa ngokukhiqizwa kwama-nano-dispersions, ukulawula okuqondile kwe-sonication kanye nokwelashwa okuthembekile kwe-ultrasonic kokumiswa kwe-nanoparticle kubalulekile ukuze uthole imikhiqizo esebenza kahle kakhulu.
Amaprosesa we-Hielscher Ultrasonics 'akunikeza ukulawula okugcwele kuwo wonke amapharamitha wokucubungula abalulekile njengokufakwa kwamandla, amandla we-ultrasonic, amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa nesikhathi sokugcina. Ngaleyo ndlela, ungaguqula amapharamitha abe ezimeni ezilungiselelwe, okuholela emuva ekusakazweni kwekhwalithi ephezulu njenge-nanosilica slurries.
Kunoma iyiphi ivolumu / umthamo: I-Hielscher inikeza ama-ultrasonicators kanye nephothifoliyo ebanzi yezinsiza. Lokhu kuvumela ukumiswa kohlelo olufanele lwe-ultrasonic lohlelo lwakho lokusebenza nomthamo wokukhiqiza. Kusuka kwizitsha ezincane eziqukethe amamililitha ambalwa ukuya emithanjeni ephezulu yevolumu yezinkulungwane zamalitha ngehora, i-Hielscher inikeza isisombululo esifanele se-ultrasonic senqubo yakho.
Ukuqina: Izinhlelo zethu ze-ultrasonic zinamandla futhi zithembekile. Onke ama-ultrasonicators ama-Hielscher akhelwe ukusebenza kwe-24/7/365 futhi adinga ukugcinwa okuncane kakhulu.
Ubungani bomsebenzisi: Isoftware echaziwe yamadivayisi wethu we-ultrasonic ivumela ukukhethwa kwangaphambili nokulondolozwa kwezilungiselelo ze-sonication ze-sonication elula nethembekile. Imenyu enembile itholakala kalula nge-digital-touch touch-display. Isilawuli kude sesiphequluli sikuvumela ukuthi usebenze futhi ubheke nganoma isiphi isiphequluli se-inthanethi. Ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo kusindisa imingcele yenqubo yanoma iyiphi i-sonication run ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi.
Ukusebenza kahle kwamandla: Uma kuqhathaniswa nobunye ubuchwepheshe bokusabalalisa, ama-Hielscher ultrasonicators enza kahle ngokusebenza kwamandla okuvelele nemiphumela ephakeme ekusabalalisweni kosayizi wezinhlayiyana.
Ishadi likhombisa inzuzo enkulu yokusabalalisa kwe-ultrasonic kwe-silica ne-Hielscher UIP1000 uma iqhathaniswa ne-ultra-turrax. I-Ultrasonication idinga amandla amancane futhi ifinyelela ubukhulu bezinhlayiya ezincane kakhulu zesilica.
nganoma iyiphi ivolumu – kusuka ezitsheni ezincane kuya ekulayisheni amaloli ngehora